Ramla Cali: Feedhyahan qarsoodi libin ku gaadhay - BBC News Somali
Ramla Cali: Feedhyahan qarsoodi libin ku gaadhay
Lahaanshaha sawirka Richard Moore
Image caption Ramla Cali waxay doonaysaa in ay noqoto feedhyahankii ugu horeeyey ee Soomaaliya uga qayb gala ciyaaraha Olombigga
Ramla Cali markay ku guulaysatay tartanka feedhka ee Ingiriiska sanadkii 2016-kii, qoyskeedu ma daawanayn. Sababtuna ma aha in ay diidanaayeen ee warba waanay ka hayn.
Waa haweenaydii ugu horaysay ee Muslimad ah ee ku guulaysatay tartanka feedhka Ingiriiska, muddo dheerna way ka qarinaysay qoyskeeda arintaas oo waxay ka baqaysay in aanay u ogolaan doonin, ilaa haatanna qaarkood baan ogolayn ba.
"Waxaan xasuustaa markaan u tartamayey billaddda heer qaran ee feedhka, reerkayagu wuxu deganaa xaafadda Bethnal Green oo London ku taal, ciyaarta kama dambaysta ahina waxay ka dhacaysay York Hall oo aad xaafadayada ugu dhawaa" ayay tidhi Ramla Cali oo BBC-da u waramaysay.
Iyadoo hadalkeeda sii wadda ayay tidhi "waxaan xasuustaa inaan maalintaa tabobarahayga u sii dhiibay boorsadii qalabku iigu jiray oo aan ku idhi iska sii soco waan kaa daba imane. ka dibna hooyaday aan ku idhi hooyo waan soo yara lugaynayaaye hadhow baan soo noqon. Warba waanay u hayn in aan tagayo oo aan tartanka feedhka ee heer qaran ka qayb galayo, waxaas ayaan u soo maray feedhka"
Ramla Cali waxay barashada feedhka bilawday markay dhawr iyo tobon jirka ahayd, hooyadeedna waxay u sheegi jirtay in ujeedadeedu tahay jimicsi ee aanay tartan doonayn.
Muuqeeda degani wuxu dedi jiray siday ugu heellantahay feedhka, qiyaaastii markay dhawr iyo labaatan jirsatay uun baana la ogaaday in ay feedhka ciyaarto.
"Waxaan xasuustaa markaan tabobarka ka soo noqdo ee aan iyadoo guriga la wada fadhiyo soo galo oo aan is idhaa tolow maxaa dadkii isku keenay, sababta oo ah qoyskayaga caado uma ahayn in qolka fadhiga uu kuwada sheekaysto, makaasaa durbadiiba la igu yidhi jooji waxan aad waddo, maxaad isla qaawinaysaa? Hablaha Muslimiinta ahi waxan aad samaynayo ma sameeyaan, waxani waa ciyaarihii ragga, bal dadku maxay odhan doonaan markay ku arkaan? ayey tidhi Ramla oo ka waramaysa waayaheeda.
"Waan muraaradillaacay markaan hadalkoodaa maqlay" ayey tidhi. Waxay markii hore u tartarmaysay Ingiriiska haddase waxay u tartantaa dalkeeda Soomaaliya.
Si ay u raalli galiso qoyskeeda, ayey Ramal oo markaa feedhka fudud ciyaartaa joojisay, caadayna u noqotay oo kolba marka la ogaado way joojin jirtay tabobarka. Hase yeeshee go'aankeedu halkiisii uun buu ahaa.
Ramla waxay ka qalin jabisay jaamacad, marna waxay u shaqayn jirtay shirkad sharciyada ka shaqaysa laakiin waxay soo rawaxi jirtay goor dambe oo habeenimo ah. Lix bilood ka dib ayey ku noqotay ciyaartii oo nolosheda si aad ah saamayn ugu yeeshay.
Mudisho ayay ka qaxeen
Ramla iyada oo ilmo yar ah ayaa qoyskoodu ka qaxeen magaalo madaxda Soomaaliya horaantii sagaashameeyadii markii dagaalka sokeeye socday waxaana halkaa kaga dhintay walaalkeed oo 12 jir ahaa oo isagoo dibadda ku ciyaaraya madfac dilay.
In ay maanta nooshahay waxay kula noqonaysaa inay si mucjiso ah ku badbaaday marka hooyadeed ka sheekayso dhibaatadii ka qabsatay safarkii ay kaga qaxeen magaalada.
Image caption Somalia has been plagued by insecurity for more than two decades
"Gurigayagii baanu kaga soo qaxnay wax kasta oo aanu haysanay iyo waraaqahayagii. madaafiic baa dhacaysay rasaasna waa nalagu ridayey, dad baabuurka nala saarnaa bay dileen" ayay tidhi Ramla hooyadeed Aniisa Maye Maalim.
Sagaal maalmood oo silic ah oo ay dooni u sii saarnaayeey Kenya, oo ay Aniisa sheegtay in dadkii dooni kuwa shiraaca ah oo ay saaraayeen ahi macaluul u dhinteen ayay Mombasa gaadheen. Waxay ku noolaayeen raashin ay Qaramada Midoobay siin jirtay markii dambena qaxootinimo ayay ku tageen Ingiriiska.
London bay degeen oo Ramla oo Af-Soomaali keliya ku hadashaa ay waxbarasho ka bilowday.
"Waan yara hilboonaa, ilayn cuntada Soomaalidaa aad u macaane, dabeetana arday badan baa igu caayi jiray miisaankayga, ka dib baan tagay goobta jimicsiga ee jidh dhiska" ayay tidhi Ramla.
"Kama dambaystii waxaan arkay jimicsiga feedhka oo dadka la barayo waanan ku biiray, dhidid baa iga da'yey oo waan neef tuurayey, dabeetana waxaan idhi noocan baan jecelahay, sidii baan ku bilaabay natiijadiina waxay noqotay in jidhkaygii dhismay, kalsooni aan helay dad badanna aan la saaxiibay" ayey tidhi Ramla
Dhawr sanadood ka dib waxay si qarsoodi ah u tabobarataba waxay bilowday in ay ka qayb gasho tartannada feedhka markaas ayayna bulshadu baratay in kasta oo weli qoyskoodu aanu war ka hayn, waxa keliya oo ogaa walaalkeed oo ka yar oo isaguna qarin jiray.
Hooyadeed oo aad u diidanayd barashada feedhka ee inanteeda oo aabaheeed kaga darrayd ayaa tidhi "guriga waxay iman jirtay iyada oo koofiyad iyo muraayad madow xidhan"
"Maalin baan arkay indhaheeda oo madoobaaday markaasaan ku idhi maxaa kugu dhacay Ramlaay? markaasay tidhi hooyo waxba iguma dhicin" ayey tidhi
Caqabadii guurkeedu la kulmay
Marka la ogaadoba waxay qoyskeeda ku odhan jirtay waan joojiynayaa, laakiin maalin ka hor maalintii loo soo geed fadhiisanayey oo laba sanadood ka hor ahayd, ayaa qoyskoodu ogaadeen in ay weli waddo feedhkii.
Hablihii ay walaalaha ahaayeen iyo hooyadeed ayaa ninkii ay u doonanayd oo la yidhaa Richard Moore, oo qudhiisu ah tabobare feedhka ah, ayay u sheegeen in aanay ogolaanayn in uu guursado hadii aanay Ramli joojin feedhka ay ku weleftay.
Lahaanshaha sawirka Charles Hyams
Image caption Ramla Ali iyo saygeeda Richard Moore oo wada taagan gegida tartanka feedhka mar ay feedhtamaysay
Guurkii caqabad baa ka hor timi!
"Waxay ila noqotay in aan idhaa waayahay waan ka joojinayaa, anoo og in aanay iga dhab ahayn" ayuu yidhi Moore, oo uu awoow u ahaa tabobarihii hore ee kooxda Chelsea, Dave Sexton.
"Waxaan doonayey in ay ku farxaan guurka laakiin waxaan sidoo kale doonayey in aan arko Ramla oo gaadhay yoolka ay hiigsanayso oo ka midhidho dhalisa waxay nolosheeda oo dhan u dadaalaysay" ayuu yidhi.
Maaalintaa dharaartii ku xigtay ayay Ramli ku guulaysatay tartanka feedhka ee England. Laakiin markii ay aqal galayeen oo ahayd bishii Oktoobar 2016- ka hor ayay joojisay ciyaaraha feedhka.
"Maalin baa telefoon ii soo dhacay oo la ii sheegay in la ii xushay in aan ka qayb galo tartanka ciyaaraha feedhka ee Yururb, dabeetana waxaan is idhi diiday odhan kari maayee aan ku noqdo tabobarkii, waxaanu ahaa go'aankii ugu fiicnaa ee aan weligay qaato" ayay tidhi Ramli
Waxay bil ka hor Ingiriiska uga qayb gashay tartanka horyaalka feedhka ee haweenka Yurub intii aanay mar labaad hadana ku guulaysan tartanka Feedhka Ingiriiska bishii Diisembar 2016-kii.
Laakiin sannadkii hore ayaa Ramli waxay go'aansatay in ay u tartanto Soomaaliya oo ah dal had iyo goor lagu tilmaamo in uu yahay dawlad baaba'day oo aan lahayn xidhiidh u qaabilsan ciyaaraha feedhka.
Hase yeeshee qoyskan cusub ee dhawaan is guursaday ayaa dedaalkoodii wuxu dhaliyey in la abuuro xidhiidhka feedhka bishii Feeberweri oo Moore na wuxu noqday tabobaraha qarnka ee feedhka.
Iyadoo Ramla iyo Richard ay weli wadaan dedaalka yoolka ay hiigsanayaan, ayaa waraysi ay siisay TV Soomaalidu leedahay waxa uu geliyey yididiilo.
Ramla oo ka sheekaynaysa dhacdadaa ayaa iyadoo muusoonaysa tidhi " nin ii abti ah baa ila soo hadlay oo igu yidhi aad baan kuugu hanwaynahay. Waxaad waddaa wax fiican, aad baanan uga damqaday markaan maqlay in aad muddada intaa leeg qarsoodi ku soo wadday. Ha baqan anigaa hooyadaa u sheegaya in waxaad samaynaysaa yahay wax fiican oo aan ceeb ahayn"
"Alla maxaan maalintaa ooyey" ayey tidhi.
Kama dambaystii Ramla hooyadeed baa ogolaatay markay ogaatay in ay wax fiican u qaban karto dalkeed Soomaaliya ee dhibaatadu ka jirto.
"Imika kama joojin karo oo waanay iba yeelayn, markaa waxaan yeeli uun wixii ay ku farxayso" ayay tidhi Aniisa Maalim.
"Waxaan ku idhi uun khimaar xidho si dadku u gartaan in ay tahay gabadh Muslimad ah oo fiican"
Haldoor bulsho ayay noqotay
"Sababta ay hooyaday ii odhan jirtay jooji waxay ahayd waa bulshada oo ay dhaliishooda ka baqaysay, laakiin markay ogaatay in bulshadii ogolaatay iyaduna way aqbashay" ayay tidhi Ramla.
"Run ahaantii imika aad bay ii taageertaa, ma malayn kartid farxadda iyo xiisaha ku galaya markaad wax aad jeceshahay kala sheekaysato qof aad jeceshahay, waa dareen aan la cabbiri karin"
Ramla waxay sidoo kale taageero aan kala go' lahayn ka heshay bulshadii ay hooyadeed marka hore ka cabsanaysay in ay dhaliili doonto.
"Maalin kasta waxa dadku ii soo qoran fariimo odhanaya wax fiican baad dalkeena u taraysaa, wacyiga bulshadeenaad kor u qaadaysay, dalkeena oo col iyo abaar uun lagu bartay muddo dheer ayaad wax war togan lagaga sheego falaysaa, aad baanu kuugu mahadnaqaynaa" ayay tidhi Ramla
Inkasta oo dad bulshada ka mid ahi ay weli dhaliilaan oo ay weliba ka mid yihiin walaalaheeda iyada ka waawayni, hadana waxay hiigsanaysaa in ay talaabo kale hore u sii qaado.
Soomaaliya weligeed kama ay qayb galin tartanka feedhka ee ciyaaraha Olombigga, billad ay ku guulaysatana hadalkeed ba daa, laakiin Ramala Cali waxay doonaysaa in ay labadaa arimood ba ka dhabayso.
Haday guul ka soo hoyso iyo hadii kaleba, Ramli waxay rumaysantahay in isku dagyga arintaasi sidiisaba guul u yahay.
"Mar baa [qof dumar ahi] fariin iigu soo dirtay baraha bulshadu ku xidhiidho oo waxay tidhi: inantayda ayaa daawatay waraysi lagaa qaaday dabeetana waxay bilowday in ay feedhka barato, waana toban jir. War fiican buu ahaa oo waxaan is idhi hadii aad sidaa dadka qof dhiiri geliya ugu noqoto waabad guulaysatay" ayay tidhi Ramala Cali